Loharanom-baovao (loharano) - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Loharanom-baovao (loharano)
Ny Lemur Conservation Network no dingana manaraka izay voalaza ao anatin’ ity drafitr’asa iray ity izay entina hiarovana ny varika na fantatra amin’ny teny angilisy hoe « Lemur Action Plan” izay nivoaka ny 21 Febroary 2014 lasa teo tao amin’ny gazety « Journal science ». Ity drafitr’asa ity dia teraka taorian’ny fandrindrana ilay atrik’asa hoe “Lemur Red-Listing and Conservation Planning workshop” izay nokarakarain’ny IUCN-SSC Primate specialist Group ny faha 9-14 volana Jolay 2012. Izy ity no voalohany amin’ireo atrik’asa izay nifanesy taty aoriana ary mikasika ireo « mammifères » na ireo biby mampinono sy mitera-batana ho an’ny IUCN Red List. Natao tao Antananarivo io atrik’asa io ary natrehan’ireo manam-pahaizana manokana momba ny varika efa mihoatra ny 60 isa , ary ny 40 amin’izy ireo dia avy eto Madagasikara avokoa.
Fijerena manokana eran-tany ireo Primata sy ny fiainany (Primate Watching and Life-Listing)
Misy indostria mandany aman-tapitrisa dolara ho an’ny fijerena manokana eran-tany ireo vorona rehetra. Misy ireo mpikaroka momba ireo vorona na ireo izay manam-pitiavana manokana hijery ireo vorona eran-tany no mitety izao tontolo izao hijery vorona fotsiny. Fitiavana efa latsa-paka ao anatin’izy ireo no tsy maintsy mahita ireo vorona rehetra. Hatramin’izao dia ireo mpikaroka sy ireo olona tia vorona no manao izany. Ankehitriny kosa dia hametraka toy izany ihany koa zareo IUCN/SSC Primate Specialist Group, mba ahafahan’ireo mpikaroka sy ireo tia ireo biby Primata, hitety izao tontolo izao ka tsy ho latsa-danja amin’izany ny fijerena varika ary irina ho lasa hanana toerana lehibe amin’ny fizahana ireo biby ho an’ny mpizahan-tany izany. Raha maniry ny hahalala bebe kokoa mikasika izany “Primate watching and lige-listing” izany ianao dia tsidiho ny rohy an’ny Primate Specialist Group ahalalàna bebe kokoa mikasika ireo fepetra sy zavatra tsy maintsy tandrovana amin’ny fanantanterahina izany.
Ireo loharano tsara ho fantatra mikasika ny varika
Ity lisitra ity dia nametraka ireo sata fiarovana ireo karazana biby voalaza fa ahiana ho lany tamingana. Ka hatramin’ny 50 taona eo amin’ny ankapobeny ny fanasokajiana azy ireny. Mampiseho mangaraharaha ny lisitr’ireo karazam-biby rehetra efa ho mila lany taranaka ary noho izany dia mampirisika ny fiarovana azy ireny. Afaka ampiasaina amin’izany ireo fitaovana fikarohana manokana eo amin’ny tranonkalan’izy ireo raha toa ka liana ny te-ahafantatra misimisy koakoa ny mikasika ny Gidro/varika sy ireo taha (sata) maha ho lany tamingana azy ireny ianao.
Ity manaraka ity indray dia tambazotra iray izay iombonana’ireo siantifika sy mpiaro ny Primata sy ny tontolo iainana amin’ny ankapobeny izay miara-mijoro miady amin’ny loza mitatao amin’ny faha-ho-lany ringana ireo karazana biby izay manakaiky indrindra ny olombelona na Primata. Ny PSG dia mampirisika ny fikarohana mikasika ny ekolijia, ny fiarovana ireo karazana « primata » aman-jatony toy ny rajako, varika, apes, sy ireo karazany hafa izay tsy mivoaka masoandro fa amin’ny alina.
Lemur News indray dia gazety mivoaka isan-taona izay antontan’ny ampahany mpikaroka Malagasy amin’ilay IUCN SSC Primate Specialists Group. Mamoaka asa soratra izay mikasika amin’ny ankapobeny momba ireo karazana gidro/varika isan-karazany sy ny toeram-ponenan’izy ireo. Anankiroa ny tanjon’io gazety io dia ny voalohany indrindra mba ho sehatra ahafahana mifanerasera sy mifampizara ireo loharanom-baovao rehetra momba ny biolojia mikasika ny gidro/varika sy ny fiarovana azy ireny. Ny faharoa manarak’izany dia ny fampahafantarana sy fanairana ny mponina ny loza mitatao izay mikasika ny mety ho hahalany taranaka ny gidro/varika.
Ity boky ity indray kosa dia angon- tserasera anisan’ny lehibe indrindra izay hita mivantana eto amin’ny aterineto izay ahitana ny mikasika ny gidro/varika rehetra izay hita eto Madagasikara. Raha te ahafantatra manokana momba ny « taxonomy » , ny fitiliana manokana, ny loza mihatra na mitatao amin’izy ireo, ny fikarohana sy ireo mpikaroka, ireo biby voasambotra, ny fanabeazana sy ny fanairana ireo mponina loharanom-baovao isan-karazany, fahazoan-dalana manao fikarohana sy rohy marosamihafa dia manaova fikarohana miankina amin’ny toerana na taxan’ilay gidro/varika tianao ho fantatra. Ito foto-drafit’asa ito dia notarihin’ny Office National pour l’Environnement ary novatsihan’ny JRS Biodiversity Foundation vola.
Loharano eto Madagasikara